Ma ugbua .... Ọ bụrụ na ị naghị abụ abụ, agbakọta ọzọ dị gị! (mepụtara) - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #22 Category: DJ Drops
Ma ugbua .... Ọ bụrụ na ị naghị abụ abụ, agbakọta ọzọ dị gị! (mepụtara)
Ejiri kpoo 'ya ulo akwukwo ulo akwukwo di iche iche site na 90s (mepụtara)
Ọ bụrụ na ị nwuolarịrị ... Welie ihe ọṅụṅụ gị dị elu na mbara igwe! (mepụtara)
Onye na-eti mkpu! Ugbu a, mee ya n'olu dara ụda! (mepụtara)
Ụmụ nwanyị na Onye Nwanyi ... Obi Ụtọ Afọ Ọhụrụ! (mepụtara)
Nabata na New Year na ahụmahụ ọhụrụ na ntụrụndụ ntụrụndụ. Jide, ọ na-agba ọsọ ka ọ na-agba ọsọ. (mepụtara)
Ọ bụrụ na i nwetabeghị nọmba ha ma ... chee ihe? Ọ naghị eme! (mepụtara)
Enwere m ike ịnye uche gị biko? Ọ bụrụ na Freddie Murphy nọ n'ụlọ, biko bịa n'ọnụ ụzọ. Nwunye gị maara na ị nọ ebe a. Tinyegharịa, Freddie Murphy nwunye gị nọ ebe a. Biko pụọ n'ụlọ ahụ ... ị na-agba! (mepụtara)
Ụmụ agbọghọ niile na-eme mkpọtụ! (ezi ụda) (mepụtara)
Ụmụ nwanyị na nwa nwoke, ị nwere ike ijide ịnyịnya ibu onye ọ bụla maka elekere 30 na-esote n'azụghị nsogbu. (mepụtara)